Home Wararka Maanta Xog-Siyaasi ah: musharax la ogaaday inuu ugu cad cad yahay shaqsiyaadka hana...
Xog-Siyaasi ah: musharax la ogaaday inuu ugu cad cad yahay shaqsiyaadka hana kara hogaanka dalka.
Doorashada baarlamaanka waa gebo gebo, waxaana loo sii bira tumanayaa gudoonka labada aqal iyo hogaanka sare ee dalka, waxaase jirta laba daraf oo dhanka loolanka xilka madaxweynaha ah.
Mid waa tartan la ogyahay inuu dhex marayo kooxo muddo sanado ah dadka hortaagan mucaarad iyo muxaafad ah, darafta kale waxaa sii saadaalinta iyo u kuur galidda cidda noqon karta hogaanka lagu baraarugo waqtiga ugu danbeeya ee doorashada.
Xogo laga helay dhinacyo siyaasiyiin ah iyo mas’uuliyiin hey’adaha dowladda ka tirsan waxay tilmaamayaan inuu jiro shaqsi maalmihii u danbeeyay la hadal hayey inuu isu soo taagayo xilka madaxweyne ee Soomaaliya, islamarkaana uu durba helay fursado wadada dheer u sahli kara.
Xildhibaano ku cusub baarlamaanka iyo kuwo sanado ku soo jiray dibna markale ugu soo laabtay ayaa ku xog waramay in Cabdullahi Cali Xasan, wasiirkii hore ee ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya ee xukuumadii Xasan Cali Kheyre labadii sano ee ugu dambeysay, uu hadda yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana uu taageero ka helayo bulshada rayidka ah iyo siyaasiyiin aaminsan in isagu ugu mudan yahy xilka madaxtinimada dalka xilligan adag.
Musharaxan reer Muqdisho ah ayaa lasheegey in uu qaatay talo soo jeedin badan oo kaga timid qeybaha kala duwan ee bulshada, Iyagoo u arka inuu leeyahay sifaha hogaan ee xilligan dalka looga baahi qabo marka laga eego marxaladaha siyaasadeed ee la soo maray dhowr iyo labaatankii bilood ee tagtay.
Wasiir hore Cabdullahi Cali Xasan ayaa dadka yaqaana waxay sheegeen in uu yahay nin shaqsi ahaan degan, dulqaad badan, karti iyo amaano leh, caadil ah, waayo arag ah kana soo shaqeynayey mudo ka badan 30 sano, hey’adaha dowliga ah, hay’adaha samafalka gaar ahaan kuwa caalamiga ah iyo kuwa waddaniga ah iyo arimaha ganacsiga islamarkaana siyaasadda soomaaliya ku dhex jiray 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Indheer garadka reer Muqdisho iyo siyaasiyiin kale oo maamul goboleedyada ka kamid ah ayaa rumeysan in Wasiir hore Cabdullahi haddii ku guuleysto kursiga dalka laga maamulo ee madaxtooyada uu si sahlan u kasban karo mucaarad iyo muxaafad intuba, dalkana gaarsiin karo meel wanaagsan.
Doodaha warbaahinta, hadal heynta bulshada iyo falanqeynta siyaasadda bilihii u danbeeyay waxay dhamaan ku saabsanaayeen boobka doorashada socda iyo sida xal loogu heli karo ragga xildhibaanada soo noqday ee markii hore ahaa saraakiil iska soo horjeedda.
Waxaa kale oo jirta in aqoonyahano iyo quboro siyaasadeed ay ka digayeen hadii uu soo baxo madaxweyne dhanka mucaraadka ama muxaafadka ah uu dalka geli karo xaalad hubanti la’aan ah iyo natiijo aan la isla aqbalin.
Xilli uu waqtiga is gurayo, doorashada baarlamaanka ku socto qaab aysan bulshady ku farxin, waxaa isa soo taraya baaqa ku aadan in doorashada madaxweynaha la raadiyo xal ka duwan sida muuqata, islamarkaana dalka loo dooro shaqsi isku wadi kara dhinacyada dagaalsan, baarlamaanka la soo wada galay iyo shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn, waxaa xusid mudan in Siyaasi Cabdullaahi Cali Xasan uu yahay aqoonyahan xogogaalka u ah xaalada dalka iyo marxaladihii uu soo maray uuna leeyahay karti iyo waay-aragnimo uu ku mideyn karo shacabka Soomaaliyeed oo kala qoqoban isla markaana uu u jiheyn karo dowlad wanaag, deganaansho siyaasadeed, mid amni, horumar dhaqaale iyo bulsho, cadaalad iyo sinnaan.